Ama-headphone Sennheiser HD 380 PRO: Uhlolojikelele, izici nezithombe
Isisetshenziswa ngokusebenzisana umsindo is njalo ngcono, nokunikeza okusezingeni eliphezulu ukusebenza acoustic. Intuthuko yezobuchwepheshe kuthinte namadivayisi amateur imishini yobuchwepheshe, kodwa abakhiqizi namanje bavame ukuhlukanisa lezi izingxenye ezimbili. Noma kunjalo, earphones kwande, okuyinto anesikhundla neuropathy - ungakwazi ukutshela, lokhu amadivayisi semiprofessional ukuthi sihlanganise izinzuzo kokubili izigaba. Omunye onobuhle yesiteleka kakhulu zamuva kule niche ukuthuthukiswa Sennheiser HD 380 PRO. Ukubuyekeza ukuguqulwa kuzosiza ukwakha umbono mayelana nezinzuzo, nebubi nezici isiphakamiso.
Sennheiser asikwazi ngokuthi i debutant ku lulwimi professional embobeni ingxenye. ukuthuthukiswa wakhe wangaphambilini yochungechunge oluthile lwezinto ezenzeke 280 wathola eziningi Izibuyekezo ezibucayi ukuthi utshelwa Onjiniyela indlela olunzulu ngokudalwa imodeli HD 380. Ngaphezu uthuthukiswe encane, umenzi wenze ngcono sína lokucutshungulwa isignali ukudlala izindlela. Ukusetshenziswa izinto ezingcono esikhathini yokuqedela of Sennheiser HD 380 PRO futhi anda futhi umsindo ukwahlukanisa. Ngaphezu kwalokho, inkampani iye yanquma ukwandisa umthamo afika ku 110 dB, okuyinto ikhanga imodeli hhayi kuphela abathandi bomculo kodwa futhi ochwepheshe.
Headphone Izingxenye kungukuthi abadliwa izesekeli ezingadingekile, kodwa ngezindinganiso lanamuhla, ibukeka iyinhle. Kuhlanganisa, ngaphandle idivayisi main, ikhebuli esikhiphekayo, icala bewathwele i-adaptha ngezinga eliphakeme mini-Jack isixhumi ku zosayizi ojwayelekile 6.3 mm. Ngenxa yalokho, umsebenzisi ithola ama-headphone ejwayelekile ebizayo, intengo okuyinto ayizinkulungwane 7-8. Hlikihla.
Indlela kulingane izindleko isiphakamiso kungenziwa wehlulelwa specs. Kufanele kuqashelwe ukuthi imingcele efana akanalo zonke onobuhle amateur. Uma senza nje uma eqhathaniswa naso ongakhetha ingxenye professional, kungenzeka ukuhlangabezana nokusebenza ephakeme, kodwa intengo luyokhula cishe ngezinye izikhathi. Ngakho, ama-headphones le Sennheiser HD 380 PRO abe nezici ezilandelayo:
izinkomishi umbono - esehlanganise izindlebe.
Thayipha ukuguqulwa acoustic - ashukumisayo.
Ama-headphone isisindo - 220 amagremu.
Ama-headphone Design - Kuvaliwe.
Ukumelana Inkomba - 54 ohms.
imvamisa uhla - 8 kuya 27 000 Hz.
Ikhono komsindo ukunciphisa - angafika ku-32 dB.
amandla Extreme - 500 MW.
Inkomba ingcindezi acoustic - 110 dB.
Intambo obuphelele - 3 m.
Plug - standard mini-Jack ipulaki nge usayizi adaptha ukuze 6.3 mm.
I evelele womshini amapulasitiki impahla, kanye metal emelelwa izakhi ngabanye. Ngokwesibonelo, walibumba is futhi ensikeni yibhande lasebunzini phakathi lwaleli ingxenye. Massive indlebe pads Sennheiser HD 380 PRO kakhulu bamba ikhanda uvalwe ukuvala ezindlebeni. Ukutshala ngokuvamile ukhululekile, kodwa kuyafaneleka ikakhulukazi siphawula Ukujikeleza khulula lezindebe lingamashekeli benethuba ukwephulwa kwale isiqondiso. Ukuhlala e-headphones kungaba isikhathi eside ngaphandle kabi. I negative kuphela - kuye ngokuthi lokushisa komoya ngaphansi kwesikhumba perspires.
Kukhona omunye miscalculation sibanga usizi, okuyinto kulokhu lihlotshaniswa ukuhlonza izinkomishi sokunene nesobunxele. Ngokwesiko, ikhebula elisukela earphone ngakwesokunxele, kodwa izinhlamvu L and R kulokhu ezicashile - basuke isibambo ku lomnyango. izinkinga Special lokhu isixazululo Akawukhululi, okungenani, ungakwazi ukujwayela, kodwa namanje ku trifles ezinjalo brand adumile ngokuvamile ungasindisi. Kodwa ye Sennheiser HD 380 PRO yenziwa nge high futhi akabubangeli ukukhathazeka. Ngaphezu kwalokho, uma kunesidingo, kungaba itsatfwe Isixhumi okhethekile.
Nakuba zikhona imibala umsindo basukelane nge ungaphoqwanga muntu ukusenza nebhesi ezijulile. Njengoba lebanga okusezingeni eliphezulu, bathenga uthulisiwe. Mids ngomfutho kancane - mhlawumbe lokhu ehilelekile futhi inikeza nokucija uma udlala vocals. Ngokuvamile, izingoma vocal ka intelligibility ezahlukene, nakuba kuyofikwa le unnaturalness. Ububanzi othakazelisayo imodeli Sennheiser HD 380 PRO libanzi impela, okunikeza isizathu baxhumanisa lokho idivayisi jikelele. Ngaphezu kwalokho, ama-headphones babhekene kahle ukutadisha stereo. Kuyinto evamile ukuba onobuhle elivaliwe ukuphela, kodwa kulokhu kukhona indawo enhle futhi umsindo ozungezayo okwanele.
Uma thina ukhethe usondelene nalo kakhulu kuleli yunithi izinhlobo ziqokonyiswe umculo soft, siqala nge "ezisinda" kangaka imodeli zezingoma enhle yokubhekana nokushona kwakhe. Nalapha futhi, lesi sigaba amadivayisi yikhono ukwedelela ngayo amaza okusezingeni eliphezulu naphakathi. Ngakho-ke, ukukhetha HD 380 ngokuya play azinake okungenani umsindo wekhwalithi ephezulu ku-bass.
Ukulandelela izitayela ezintsha ekuthuthukiseni imishini acoustic, umenzi German unqume ukuhlola amandla ulwazi embobeni nge kumadivayisi eselula. Le modeli ikhono Sennheiser HD 380 PRO inomsindo ekukhangiseni, kodwa akulula kanjalo umkhuba. Ikakhulukazi, abasebenzisi abaningi ukubika kwedivayisi abampofu ezithile Apple iPhone chungechunge. Lokhu kungenxa yokuntuleka kukagesi - ngenxa umsebenzisi ukulungisa ivolumu esiphezulu. Ngaphezu kwalokho, okwenza band MF lapho yokuxhuma Smartphones nakakhulu lubonakale ngenxa kahle yakhelwe bass irejista. Le nkinga kungenzeka kubangelwa nobuthakathaka amplifier.
Sekuyisikhathi eside iningi abasebenzisi ziqokonyiswe esithunzini we ukudlala okushelelayo ngendlela ebanzi imvamisa ububanzi. Uma Awayi ezicashile izintandokazi ehlukile, lingachazwa ngokuthi embobeni umsindo ecacile futhi kunokulinganisela yini. Kunezindlela eziningi umbono omuhle mayelana Ergonomics zedivayisi. Kulo mongo, amanothi yibhande lasebunzini phakathi ukhululekile nge arc esithambile futhi ukhululekile indlebe izinkomishi, futhi kumnandi izinto yokukhiqiza. Endaweni ehlukile, izici ikhebula, okuyinto bephethe imodeli Sennheiser HD 380 PRO. Izibuyekezo ukugcizelela hhayi kuphela 3-unyawo lwayo obuphelele, kodwa futhi lo ukuqina we ezibonakalayo, ezingashabalala usenza simethembe amandla ukuqina intambo.
Izibuyekezo ezibucayi futhi adlule zonke izici imodeli. Njengoba for umsindo, kukhona ubuthakathaka abasebenzisi ukubika amaza okusezingeni eliphezulu, naphezu ubumsulwa babo. Kukhona aphikisanayo ukubukwa phezu izinkomishi ukulungisa nge yibhande lasebunzini phakathi. Ngempela, ama-headphone kukhona mikhulu futhi abanye abanikazi ngalokhu kuphazamiseka. Kwaba okufanayo ezithunyweni ikhebula. Ngakolunye uhlangothi, kuba isikhathi eside futhi ukugqoka nemithi, kodwa ukuthi kufanele ukhokhe ukwanda ukujiya, okuyinto kahle, uma ulalele umculo emgwaqweni. Amalungu waphawula futhi ikhebula isisindo - it is ikakhulukazi owayizwa lapho uthola agqoke ama-headphone. Inani ayizinkulungwane 7-8. Hlikihla. futhi kubonakala ngokungenangqondo okusezingeni eliphezulu zalolu hlobo locingo. Nokho, izimbangi kusukela ukuthuthukiswa German okungaka. Kuphakathi idivayisi entry level umsebenzi ophambili noma onobuhle kubalandeli Nokho, okuyinto, akuzona kuze kube version HD of 380 ezintweni eziningi izinkomba. Ngokuvamile, izinketho neqembu lokuqala ezibizayo, ngakho isiphakamiso kusukela inkampani German ufaneleke ngokwaso njengoba umkhiqizo ukuthi ezilinganisweni futhi kokusebenza, nokusebenza nge Ergonomics.
Imodeli kuyoba ukhetho best uma uhlela ukusebenzisa headphones ekhaya. Ziyakwazi ukhululekile futhi ahlinzeke umsindo ehloniphekile - ngisho ngokumelene isizinda lozakwabo okhokhelwayo. imodeli Outdoor Sennheiser HD 380 PRO ngeke isebenze ngoba izici abampofu ergonomic. Umthelela kanye nenqwaba izinkomishi, kanye ikhebula obukhulu, kanye amaphutha kwedivayisi ngeselula umculo imithombo. Esinye isici esibalulekile nokuhlolwa yalezi okwasekhanda nokwethenjelwa. Noma kunjalo, Sennheiser inkampani akuyona ngonyaka wokuqala uvezwa kulesi sigaba futhi ngawakhulisa izinga kuhle eliphezulu umkhiqizo wawo umhlangano. Model HD 380 iwukuqinisekisa yenchubomgomo nesibopho abadali kukhethwa izinto futhi ukuklanywa embobeni design. Umphumela waba kudivayisi kulula ukuyisebenzisa, isikhathi eside futhi ahlinzeke umsindo wekhwalithi ephezulu.
Izimpawu Slavic netinchazelo tawo. izinhlamvu Slavic. Slavic oberezhnye izimpawu
Pipe ukwahlukanisa Thermaflex: Izici kanye nokubuyekeza
Khetha bio-yangasese: ukusebenza isimiso, izici nezinhlobo